အဘို့အဘယျကွောငျ့အဘယ်သူမျှမ 777 P3D V4?
အဘို့အဘယျကွောငျ့အဘယ်သူမျှမ 777 P3D V4?2နှစ်ပေါင်း5months ago #894
Till date I'm unable to findaworking 777 add-on ဘို့ P3D V4 ။ ဒါကြောင့် '' အဘယ်သူမျှမ preview ကိုရရှိနိုင်ပါ '' ဖြစ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်မထောက်ခံပါဘူးဖြစ်စေ P3D V4. Is anyone havingaworking 777 add-on for V4?
အဘို့အဘယျကွောငျ့အဘယ်သူမျှမ 777 P3D V4?2နှစ်ပေါင်း5months ago #896
ဤသည်မှာအကြိမ်အနည်းငယ်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ လေယာဉ်အမြောက်အများနှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ P3D သူတို့သေး, ဖို့ဒီဇိုင်းမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ် V4 ။ ဒီနေရာမှာကျွန်မတွေ့ရှိခဲ့စုံတွဲတစ်တွဲချည်ရဲ့ ...
www ။prepar3d.com / ဖိုရမ် / viewtopic.php? t = 124878
အဘို့အဘယျကွောငျ့အဘယ်သူမျှမ 777 P3D V4?2နှစ်ပေါင်း5months ago #899
သငျသညျ Rider ကျေးဇူးတင်ပါသည်
0.189 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်